Uhlobo olutsha lwendlela yokuvelisa ekujoliswe kuyo ye-titanium-aluminium
Ngoku, Izinto ekujoliswe kuzo ekujongeni imveliso emhlabeni zisebenzisa iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokwenza iithagethi zokujinga kwealuminium. Yenziwe ngumbumba wokubumba, Ngexesha lokuveliswa kweethagethi zokujinga kwealuminium, ukongezwa kwezinto zokudibanisa zihlala zibangela ukwahlulwa kweethagethi zokujolisa ekujoliseni ialuminium, ethi yona ibangele ukuba umgangatho weefilimu ezitshizayo zihlwempuzeke kwaye umphezulu wethagethi yokuchamela ulungele ukuvelisa amasuntswana amancinci., eya kuthi ichaphazele ukufana kweempawu zefilimu. Ukuba i-aluminium alloy sputtering ekujoliswe kuyo yenziwa yindlela eyaziwayo yokutshiza, nangona ezi zinto zichazwe apha ngasentla zinokuthintelwa, iya kwenza ujoliso ekujongeni Indleko yemveliso inyuswe kakhulu, ngakumbi xa usenza iithagethi ezithile ekungekho lula ukuzenza kwaye kufuneka zisebenzise ukulingana okushushu, indleko ziya kwandiswa ngenxa yokusetyenziswa kokulingana okushushu.
Ukwenza inkqubo yokuvelisa iithagethi ze-titanium-aluminium ekujoliswe kuzo zibe lula kwaye ziphantsi, Nantsi indlela yokwenza i-aluminium alloy sputtering ekujoliswe kuyo nge-gas spray powder. Xa kuthelekiswa nomgubo okrwada wokujolisa ekujongeni, umgubo we-alloy uhlanjululwe ukuze ufumane ubungakanani obufanelekileyo bomgubo wamasuntswana, kwaye ekugqibeleni umgubo utsalo oshushu-ucofe ukwenza i-aluminium ingxubevange ekujoliswe kuyo. (Aluminium-chromium, i-aluminium-silicon-ithusi, ialuminiyam-titanium, njl.). Amanyathelo okuphumeza akhethiweyo ngala: bonelela ngezinto zokwenza izinto zesinyithi ekwenzeni ialuminium alloy ekujoliswe kuko kwaye inyibilike kwisinyithi esityhidiweyo; emva koko, Sebenzisa indlela yokutshiza irhasi ukwenza umgubo wentsimbi kwisinyithi esityhidiweyo; ekugqibeleni, ukufudumeza umgubo wentsimbi ngomshini owenziwe ngealuminium alloy izinto ekujoliswe kuzo, kwaye kudlula igesi egalelwe njengegesi yokukhusela. Le ndlela inokuthintela ukusilela kokwahlulwa kwezinto kunye nee-microparticles, kwaye wenze ekujoliswe kuko ekumgangatho ophezulu ngokukhawuleza kwaye kungabizi kakhulu.
Prev: Malunga nokutshiza okujikelezayo kweethagethi zokuSasazeka
Next: Cacisa ulwazi lokujolisa kwindawo ekujoliswe kuyo umazibuthe ojikeleze umazibuthe
» Uyilungisa njani into ekujoliswe kuyo
Iithagethi ezisetyenziselwa ukuntywila kwimveliso ye-elektroniki